ဇက်ကြောတက်နေပြီလား? - For her Myanmar
ဇက်ကြောတက်တာ ဖြစ်နေကျပဲ ဆိုပြီး မပေါ့ဆသင့်ပါနော်…
ဇက်ကြောတက်လိုက်တာလို့ ယောင်းတို့ တော်တော်များများ ညည်းဖူးကြလိမ့်မယ် ထင်ပါရဲ့… အများအားဖြင့်တော့ ဇက်ကြောတက်တယ်ဆိုတာ ကွန်ပျူတာသုံးတဲ့ အခါမျိုးမှာ၊ ထိုင်ပြီး အလုပ်လုပ်တဲ့ အခါမျိုးမှာ အနေအထား မမှန်တာမျိုးတွေကြောင့် ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ အဆစ်အမြစ်ရောင်ရောဂါ (Osteoarthritis) ကြောင့်လည်း ဇတ်ကြောတက်ခြင်းကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်တဲ့ ယောင်းတို့ရေ..
တစ်ခါတစ်ရံမှာတော့ ရှားရှားပါးပါးဆိုသလို တချို့ရောဂါတွေကြောင့် ဇတ်ကြောတက်တာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လည်း ဇတ်ကြောတက်တာအပြင် လက်တွေ ထုံကျင်တာ အားလျော့တာ ပုခုံးဆိုးဆိုးရွားရွား စူးအောင့်တာမျိုး ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ နီးစပ်ရာ ဆရာဝန်နဲ့ ပြသဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်နော်…
ဘယ်လို အခြေအနေမျိုးကို ဇတ်ကြောတက်တယ်လို့ ပြောလို့ရလဲ?
ကွန်ပျူတာသုံးတာမျိုး၊ ကားမောင်းတာမျိုးလို ဦးခေါင်းကို တစ်နေရာတည်းမှာထားရတဲ့ အလုပ်မျိုးမှာ ပိုဆိုးလာတတ်တာ
ခေါင်းကိုက်လာတာ စတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
Related Article >>> ဇက်ကြောတက် သက်သာစေဖို့ နည်းလမ်း (၉) ခု
ကဲ.. ဒါဆို ဇက်ကြောက ဘာကြောင့်တက်ရတာလဲ???
ဇက်ကြောတက်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေကတော့ –
အသက်အရွယ်ကြောင့်ဖြစ်စေ၊ ရောဂါကြောင့်ဖြစ်စေ လည်ပင်း အဆစ်များ ပျက်စီးခြင်း
အရိုးအတက်ထွက်ရာကနေ လည်ပင်းတစ်ဝိုက်ရှိ အာရုံကြောများကို ဖိမိခြင်း
အရိုးအဆစ်ရောင်ခြင်း ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ခြင်းတို့လို ရောဂါမျိုးခံစားရခြင်း စတာတွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အခြေအနေ တိတိကျကျ သိချင်ရင် ဘာတွေ လုပ်လို့ရလဲ???
ဇက်ကြောတက်ရခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းကို သိဖို့အတွက်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ ပြသပြီး ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်း၊ CT နဲ့ MRI ရိုက်ခြင်းတို့လိုမျိုး စစ်ဆေးမှုတွေကို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေကျ တခြား ရောဂါတွေ ရှိ၊ မရှိ ဆိုတာမျိုး သိရဖို့ သွေးစစ်တာမျိုးတွေကိုလည်း လုပ်ရနိုင်ပါတယ် ယောင်းတို့ရေ..
ဘယ်လို ကုသလို့ ရပါသလဲ???
အရမ်း မဆိုးရွားတဲ့ ဇက်ကြောတက်ခြင်းတွေကိုတော့ မိမိအိမ်မှာပဲ ကုသမှုပြုနိုင်ပြီး နှစ်ပတ်သုံးပတ် အတွင်းမှာ သက်သာသွားတတ်ပါတယ်။
ဇက်ကြောတက်တာ မပျောက်ဘဲ အချိန်အကြာကြီး ခံစားနေရရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ သွားရောက်ပြသသင့်ပါတယ်။
ဆေးဝါးအနေနဲ့ ကတော့ ဆေးဆိုင်တွေမှာ အလွယ်တကူ ဝယ်ယူနိုင်တဲ့ အကိုက်အခဲ ပျောက်ဆေးမျိုးကို သုံးနိုင်ပါတယ်နော်…
Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) (လျှပ်စစ်ဖြင့် အာရုံကြောကို လှုံ့ဆော်ခြင်း)
လည်ပင်းလှုပ်ရှားမှု နည်းအောင် Collar တပ်ခြင်း စတာတွေ ရှိပါတယ်။
(တစ်ခါတလေမှာ) လည်ပင်း အာရုံကြောနားကို ဆေးထိုးခြင်း အာရုံကြောကို ဖိမိရင် ခွဲစိတ်ကုသတာမျိုး ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဆေးဆိုင်မှာ ဝယ်ယူရရှိနိုင်တဲ့ အကိုက်အခဲပျောက် ဆေးသောက်တာ
ရေနွေးအိတ်၊ ရေခဲအိတ် ကပ်ပေးတာ
ဦးခေါင်းနဲ့ လည်ပင်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးတာ စတဲ့နည်းလမ်းတွေ ရှိပါတယ်။
ထိုင်တဲ့အခါ ရပ်တဲ့အခါမျိုးမှာ အနေအထားကောင်းကောင်း ရှိဖို့ လိုပါတယ်။
အလုပ်ကို တောက်လျှောက် အချိန်အကြာကြီးမလုပ်ဘဲ အနားယူပေးပါ။
ကွန်ပျူတာသုံးတဲ့ အချိန်မှာ မော်နီတာက မျက်လုံးနဲ့ တစ်တန်းတည်းမှာ ရှိပြီး ဒူးခေါင်းတွေက ပေါင်ထက် နိမ့်တဲ့ နေရာမှာရှိပါစေ။
လေးလွန်းတဲ့ ကျောပိုးအိတ်တွေ မလွယ်ပါနဲ့။
အနေအထား မှန်မှန်ကန်ကန် အိပ်စက်ပါ။
ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ ယောင်းယောင်းတို့လည်း ဇက်ကြောတက်ခြင်းအကြောင်း တော်တော်ကြီး သဘောပေါက်သွားလောက်ပါပြီနော်…
ဇက်ကြောတက်ခြင်းက ကင်းဝေးပြီး ကျန်းမာပျော်ရွှင်တဲ့ ဘဝလေးတွေ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။
ဇကျကွောတကျတာ ဖွဈနကေပြဲ ဆိုပွီး မပေါ့ဆသငျ့ပါနျော…
ဇကျကွောတကျလိုကျတာလို့ ယောငျးတို့ တျောတျောမြားမြား ညညျးဖူးကွလိမျ့မယျ ထငျပါရဲ့… အမြားအားဖွငျ့တော့ ဇကျကွောတကျတယျဆိုတာ ကှနျပြူတာသုံးတဲ့ အခါမြိုးမှာ၊ ထိုငျပွီး အလုပျလုပျတဲ့ အခါမြိုးမှာ အနအေထား မမှနျတာမြိုးတှကွေောငျ့ ဖွဈလရှေိ့ပါတယျ။ အဆဈအမွဈရောငျရောဂါ (Osteoarthritis) ကွောငျ့လညျး ဇတျကွောတကျခွငျးကို ခံစားရနိုငျပါတယျတဲ့ ယောငျးတို့ရေ..
တဈခါတဈရံမှာတော့ ရှားရှားပါးပါးဆိုသလို တခြို့ရောဂါတှကွေောငျ့ ဇတျကွောတကျတာမြိုးလညျး ဖွဈနိုငျပါသေးတယျ။ ဒါကွောငျ့မို့လညျး ဇတျကွောတကျတာအပွငျ လကျတှေ ထုံကငျြတာ အားလြော့တာ ပုခုံးဆိုးဆိုးရှားရှား စူးအောငျ့တာမြိုး ဖွဈနမေယျဆိုရငျတော့ နီးစပျရာ ဆရာဝနျနဲ့ ပွသဖို့ လိုအပျပါလိမျ့မယျနျော…
ဘယျလို အခွအေနမြေိုးကို ဇတျကွောတကျတယျလို့ ပွောလို့ရလဲ?
ကှနျပြူတာသုံးတာမြိုး၊ ကားမောငျးတာမြိုးလို ဦးခေါငျးကို တဈနရောတညျးမှာထားရတဲ့ အလုပျမြိုးမှာ ပိုဆိုးလာတတျတာ
ခေါငျးကိုကျလာတာ စတာတှေ ဖွဈပါတယျ။
Related Article >>> ဇကျကွောတကျ သကျသာစဖေို့ နညျးလမျး (၉) ခု
ကဲ.. ဒါဆို ဇကျကွောက ဘာကွောငျ့တကျရတာလဲ???
ဇကျကွောတကျရတဲ့ အကွောငျးအရငျးတှကေတော့ –
အသကျအရှယျကွောငျ့ဖွဈစေ၊ ရောဂါကွောငျ့ဖွဈစေ လညျပငျး အဆဈမြား ပကျြစီးခွငျး
အရိုးအတကျထှကျရာကနေ လညျပငျးတဈဝိုကျရှိ အာရုံကွောမြားကို ဖိမိခွငျး
အရိုးအဆဈရောငျခွငျး ဦးနှောကျအမွှေးရောငျခွငျးတို့လို ရောဂါမြိုးခံစားရခွငျး စတာတှကွေောငျ့ ဖွဈနိုငျပါတယျ။
အခွအေနေ တိတိကကြ သိခငျြရငျ ဘာတှေ လုပျလို့ရလဲ???
ဇကျကွောတကျရခွငျးရဲ့ အကွောငျးရငျးကို သိဖို့အတှကျဆိုရငျ ဆရာဝနျနဲ့ ပွသပွီး ဓာတျမှနျရိုကျခွငျး၊ CT နဲ့ MRI ရိုကျခွငျးတို့လိုမြိုး စဈဆေးမှုတှကေို ပွုလုပျနိုငျပါတယျ။ တဈခါတလကြေ တခွား ရောဂါတှေ ရှိ၊ မရှိ ဆိုတာမြိုး သိရဖို့ သှေးစဈတာမြိုးတှကေိုလညျး လုပျရနိုငျပါတယျ ယောငျးတို့ရေ..
ဘယျလို ကုသလို့ ရပါသလဲ???
အရမျး မဆိုးရှားတဲ့ ဇကျကွောတကျခွငျးတှကေိုတော့ မိမိအိမျမှာပဲ ကုသမှုပွုနိုငျပွီး နှဈပတျသုံးပတျ အတှငျးမှာ သကျသာသှားတတျပါတယျ။
ဇကျကွောတကျတာ မပြောကျဘဲ အခြိနျအကွာကွီး ခံစားနရေရငျတော့ ဆရာဝနျနဲ့ သှားရောကျပွသသငျ့ပါတယျ။
ဆေးဝါးအနနေဲ့ ကတော့ ဆေးဆိုငျတှမှော အလှယျတကူ ဝယျယူနိုငျတဲ့ အကိုကျအခဲ ပြောကျဆေးမြိုးကို သုံးနိုငျပါတယျနျော…
Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) (လြှပျစဈဖွငျ့ အာရုံကွောကို လှုံ့ဆျောခွငျး)
လညျပငျးလှုပျရှားမှု နညျးအောငျ Collar တပျခွငျး စတာတှေ ရှိပါတယျ။
(တဈခါတလမှော) လညျပငျး အာရုံကွောနားကို ဆေးထိုးခွငျး အာရုံကွောကို ဖိမိရငျ ခှဲစိတျကုသတာမြိုး ပွုလုပျနိုငျပါတယျ။
ဆေးဆိုငျမှာ ဝယျယူရရှိနိုငျတဲ့ အကိုကျအခဲပြောကျ ဆေးသောကျတာ
ရနှေေးအိတျ၊ ရခေဲအိတျ ကပျပေးတာ
ဦးခေါငျးနဲ့ လညျပငျးလကေ့ငျြ့ခနျးလုပျပေးတာ စတဲ့နညျးလမျးတှေ ရှိပါတယျ။
ထိုငျတဲ့အခါ ရပျတဲ့အခါမြိုးမှာ အနအေထားကောငျးကောငျး ရှိဖို့ လိုပါတယျ။
အလုပျကို တောကျလြှောကျ အခြိနျအကွာကွီးမလုပျဘဲ အနားယူပေးပါ။
ကှနျပြူတာသုံးတဲ့ အခြိနျမှာ မျောနီတာက မကျြလုံးနဲ့ တဈတနျးတညျးမှာ ရှိပွီး ဒူးခေါငျးတှကေ ပေါငျထကျ နိမျ့တဲ့ နရောမှာရှိပါစေ။
လေးလှနျးတဲ့ ကြောပိုးအိတျတှေ မလှယျပါနဲ့။
အနအေထား မှနျမှနျကနျကနျ အိပျစကျပါ။
ဒီလောကျဆိုရငျတော့ ယောငျးယောငျးတို့လညျး ဇကျကွောတကျခွငျးအကွောငျး တျောတျောကွီး သဘောပေါကျသှားလောကျပါပွီနျော…
ဇကျကွောတကျခွငျးက ကငျးဝေးပွီး ကနျြးမာပြျောရှငျတဲ့ ဘဝလေးတှေ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစေ။
Tags: Cure, feel, Health, KKMM, neck, Pain, Reason, release, tips, why